Filtrer les éléments par date : mercredi, 16 juin 2021
Lasa any Frantsa omaly talata ny Filoha Andry Rajoelina.
Nanambara anefa ny Masoivoho frantsay monina eto Madagasikara fa tsy misokatra ho an'ireo tsy vita vaksiny ankoatr'ireo efa vaksiny neken'ny Vondrona Eoropeanina ireo olona tonga hiditra ny sisintany frantsay.
Ary nosinganiny manokana ny hoe tsy ekeny ny vaksiny Covishield, ka mipetraka izany ny fanontaniana hoe, nanao vaksiny ve izany ny Filoham-pirenena sy ireo mpiara-dia aminy, ka afaka niditra ny Lafrantsa, ary tsy ilay vaksiny nafarana natsindrona ny Malagasy ve izany no nampiasainy raha tsy eken'ny Frantsay io Covishield io.
mercredi, 16 juin 2021 20:23
Frantsa : Lasa namonjy ny confiramtion-njanany ny Filoha
Nanainga tamin'ny fiaramanidina Air France omaly alina talata 15 jona 2021 ny Filoham-pirenena, hiazo an'i Lafrantsa.
Araka ny fampahafantarana nataon'ny fiadianana ny Repoblika, dia anatrika ny Confirmation-njanany vavy tokana izy, ary ho tafaverina an-tanindrazana ny alahady 20 jona 2021 izao.
mercredi, 16 juin 2021 20:07
Frantsa : Mikatona ho an'ireo tsy vita vaksiny eken'ny Vondrona Eoropeanina ny sisintany
Nanao fanambaràna ny Masoivoho frantsay monina eto Madagasikara fa miverina misokatra ho an'ireo rehetra mikasa ny andeha any Frantsa ny sisintany ho an'ireo mampiseho fanamarinana fahavitana vaksiny miaro amin'ny Covid-19, ary ireo vaksiny eken'ny Vondrona eoropeanina, dia ny vaksiny Moderna, Pfizer, Astra Zeneca na Johnson & Johnson, ary ireo irery ihany.
Hatreto tsy ekena ny vaksiny Covishield.
mercredi, 16 juin 2021 08:59
Kianja Barea : Matso miaramila no hisantarana azy
Nomen’ny fanjakana ankehitriny anarana ho Kianja Barea ny Kianja Monisipaly Mahamasina teo aloha. Nasiam-panavaozana izy io. Nanontonana vola hatrany amin’ny 77 tapitrisa dolara any ho any (290 miliara ariary).